Ity no toerana ahafahanao mampakatra sary sy hamela fanehoan-kevitra milaza aminay momba ny tetikasanao. Tetikasa taloha kokoa avy amin'ny tranokala taloha dia Eto.
napetraky Andypontinen tamin'ny Wed, 09 / 06 / 2017 - 04: 56
Evinrude 3hp 3303S olana maharitra
Manana '63 Evinrude 3hp, kinova longshaft aho. Nahavita ny fanarahana azy tanteraka aho roa taona lasa izay, saingy tsy nosokafako ny lohan-doha (lafiny crankshaft) Tamin'ity fahavaratra ity rehefa nandeha sambo aho, nisy zavatra tapaka tampoka teo anelanelan'ny drivehaft sy ny crankshaft. Tsy niodina tamin'ny drivehaft (sy propeller) intsony ny crankshaft. Ny faritra ambany amin'ny motera dia ok. Rehefa nesoriko ny plug-n'ny ignition ary navadiko ny flywheel dia hitako fa nafindra tao anaty varingarina toy ny tokony ho izy avy eo ny pisotra roa. Mety ho fifandraisana crankshaft amin'ny drivehaft lasa tapaka ve izany? Driveshaft top head (to powerhead) dia hafahafa -fotoam-potoana, hafa tanteraka noho ny tamin'ny '65 Johnson 3 hp ahy, izay manana lohany boron (toy ny kintana) mahazatra eo amin'ny drivehaft.
napetraky ttravis ny Thu, 09 / 14 / 2017 - 11: 49
Namaly ny Evinrude 3hp 3303S olana maharitra by Andypontinen
Miezaka aho handray ny ...
Hiezaka ny hanala ilay ety ambany aho ary manomboka ny motera mba hahitana raha mandeha izany. Raha tsy misy olana amin'ny powerhead dia mety mila mamakivaky ny valizy ianao. Ahoana ny endrik'ireo menaka fitaovan'ny fitaovana ambany? Mety ho ratsy ny tombo-kase ary nahazo rano tamin'ny lambanao ianao izay mety hidina rehefa nipetraka kelikely. Azonao atao ny miantsena eBay raha te hahita môtô tsara ianao na farafaharatsiny iray miaraka amina faritra ambany tsara kokoa azonao fivarotana. Misy ny faritra fanoloana, saingy ho hitanao fa mandany vola mihoatra ny tokony ho izy ianao. Andramo aloha ny manavaka azy rehetra ary manadio ny zava-drehetra ary avereno miaraka amin'ny tombo-kase vaovao.
napetraky ricklummer amin'ny Mon, 04 / 24 / 2018 - 09: 07
Tsy misy fiheverana an'ity iray ity
napetraky gameroomfan tamin'ny Sun, 09 / 10 / 2017 - 13: 31
Evinrude 25 hp Big Twin (Modely 25018) Tsy manomboka / mitarika Carb
Voalohany indrindra, avelao aho hanomboka amin'ny fisaorana anao noho ny nanombohana sy ny fitazonana ity tranonkala lehibe ity!
Vao tsy ela aho no nahazo ilay motera etsy ambony. Voalaza fa niasa tsara izy io rehefa nihazakazaka farany.
Na izany aza, rehefa avy nanandrana nanombohana azy tsy nahomby aho, ary nanao fanaraha-maso vitsivitsy, dia misalasala aho. Voalaza izany, nanamarina ny spark aho ary nanamarina izany. Na izany aza, tsikaritro ny solika avy amin'ny karibonetra izay nampidina ny fanjaitra haingana. Ary koa, solika be ao amin'ny faritra misy tenda karbôro.
Nesoriko ilay karibonetra, ary hitako fa tsy nisy setroka mitsingevana. Ny float dia ilay bosoa efa taloha. Heveriko fa farafaharatsiny ny sasany amin'ireo olako tsy misy fanombohana dia vokatry ny tondra-drano noho ny valizy mitsingevana lehibe tsy mihidy tsara, na noho ny seza ratsy / maloto, ary / na ny fanamboarana mitsingevana diso.
Noho izany, nanafatra kitapo misy karbaona sy float vaovao aho. Ireto ny fanontaniako:
1) Ny fampahalalana tsara indrindra mety ho hitako teo amin'ny sehatry ny float dia: tsy mihoatra ny 1/32 "avy amin'ny haavo misy tendrony ambony amin'ny vatana karbaona. Ary 1 1/4" mitsingevana. Marina ve izany?
2) Tsy nahita zavatra be dia be tamin'ny fanjaitra fanjaitra aho. Mety ratsy ve ny fonosana, ka mandray anjara amin'ilay karbaona mitete? Inona no vahaolana amin'ny fonosana vaovao na fanoloana?
napetraky ttravis ny Thu, 09 / 14 / 2017 - 11: 55
Namaly ny Evinrude 25 hp Big Twin (Modely 25018) Tsy manomboka / mitarika Carb by gameroomfan
Izaho dia ilay lozam-pifamoivoizana foana ...
Izaho irery foana no mitsingevana ka avo lenta. Amin'ny ambaratonga, ny fanjaitra dia tokony hanidy ny fikorianan'ny solika ao anaty lovia. Tsy mandrefy na inona na inona aho.
Ny kitapo karbika vaovao dia ahitana fonosana fanjaitra izay tokony hapetraka. Ny karbôbanao dia tsy tokony hivoaka rehefa vita izay mety hampidi-doza.
napetraky gameroomfan tamin'ny Fri, 09 / 15 / 2017 - 16: 03
Namaly ny Izaho dia ilay lozam-pifamoivoizana foana ... by ttravis
Eny, misaotra ny valinteny ...
ok, misaotra tamin'ny valiny. Ny kitapo karbika nojereko dia tsy nahitana fonosana fanoloana.
Heveriko fa eo amin'ny làlana marina aho raha mbola tsy misy ny olana momba ny 'tsy fanombohana'.
napetraky ttravis tamin'ny Fri, 09 / 15 / 2017 - 23: 57
Namaly ny Eny, misaotra ny valinteny ... by gameroomfan
Ity ny solo kely sasany ...
Ireto misy fanodinana fanolo: https://www.amazon.com/s/ref=as_at?imprToken=SkxdL8dTeRyLD5isJEtUSQ&slo…
napetraky Mike L tamin'ny Sat, 04 / 21 / 2018 - 19: 56
Handeha hanandrana ny tanako hamerina amin'ny laoniny ny hazavan'ny raibeko, toa 54 avy amin'ny loko. Timer voalohany amin'ity. Nanafatra ny faritra rehetra natolotray ho an'ny feo (fanamboarana karbaona, plugs, point, condenser, coil, impeller. Mieritreritra fa mila manolo ny tombo-kase ambany koa aho, satria tsy mandeha mandritra ny 25 taona ny motera. Tsy mahita kit izay misy ny tombo-kase ilaiko. Misy sosokevitra momba ny kit na aiza no toerana tsara indrindra ahazoana azy ireo? Mikasa koa ny tady sy lohataona.
napetraky Starfish229 amin'ny Mon, 08 / 27 / 2018 - 12: 57
Sports Scott 1962 tsy hanomboka
Vetivety aho dia nahazo sambo fianakaviana izay tsy tao anaty rano nandritra ny taona 25 noraisiko dia nanomboka indray mandeha fa tsy hiverina. Hanomboka amin'ny fampiasana fluid izy io saingy ny motera dia tsy hihazakazaka.
Nividy boky iray momba ny motera 1962 Scott aho ary mila toro-hevitra momba izay tokony ataoko manaraka.
Miova ny onenan'ny fonosana misy batterie vaovao aho miady amin'ny zavatra tokony hiezahako manaraka.
toro-hevitra ve sa tokony horaisiko ho toerana iray ahafahana mandrindra izany?
Mila ny TLC ny River Runt
napetraky ttravis tamin'ny Sun, 10 / 28 / 2018 - 22: 48
5.5 Tetikasa CD-1960 HP Johnson 17 Modelin'i Bosse "Bo" Petersson
Nampidirina / nalaina tao amin'ny tranonkalan'ny facebook ao amin'ny PROJECTS Menu.
5.5 HP Johnson 1960 Tetikasa CD-17 Modely avy amin'i Bosse "Bo" Petersson - Stockholm, Soeda
napetraky boatman350 tamin'ny Wed, 01 / 23 / 2019 - 10: 36
Izy rehetra dia te-hanontany ny olona rehetra momba ny tetikasanao amin'ny 2019 sy ny fomba handehanany misaotra ny rehetra ny taona vaovao mahafaly
napetraky Lewis Walling ny Thu, 03 / 14 / 2019 - 18: 03
Fiovàna ho an'ny rafitra fiarovan-tsolika ampitomboina ho an'ny rafitra tokana
Manana 10 hp 1957 Johnson Seahorse miaraka amina rafitra solika tsipika roa aho. Te hanova azy ho rafitra tsipika tokana aho. Inona avy ireo faritra ilaiko ankoatry ny paompy solika? Raha mila carburetor aho, inona ny nomenclature amin'ity ampahany ity?
napetraky Anonymous (tsy voamarina) tamin'ny Sun, 03 / 22 / 2020 - 18: 42
Fiovam-pivezivezana solika - tsy miasa?
Sokajin-tsolika mitete ary toa tsy mamenona.
Voalohany, misaotra anao tamin'ity forum ity! Ity no fanandramako voalohany hanamboarana ny valalabemandry ary loharanom-baovao mahavariana ity pejy ity. Ity ny Johnson CD-14 ahy, toa ilay iray amin'ny antsipirihany ao amin'ny tetikasanao, ary nampiasa ny sary sy ny torolalana napetrakao aho. Ilaina tsotra fotsiny.
Niova fo avy tao anaty fitoeran-tsindrona aho ho lasa tankina misy zotra maoderina tokana, nanao ny fonosako manokana ho an'ny paompy solika ambonin'ilay karbônera ary nahavita nitety ny lakan-tsolika daholo ka mifanaraka tsara amin'ny zava-drehetra ny zava-drehetra ary azoko atao ny mamerina ilay fiompiana.
Vao nanomboka ny voalohany aho, ary mandeha izy io, saingy ny sivana solika nampidiriko tamin'ny tsipika solika niditra teo anelanelan'ny fiara mifono solika sy ny paompy solika nidina ary tsy nofenoin'ny paompy raha mandeha ny motera. Paompy miaraka amin'ny takamoa amin'ny tanky ny tsipika ary hitako ny famenoana sivana, ary koa ny sivana lovia fitaratra eo amin'ny karbaona. Raha vantany vao mandeha ny motera, ny sivana amin'ny tsipika solika dia avy amin'ny feno hatrany amin'ny foana. Tsy azoko fantarina raha manome solika ny paompy solika na raha misintona fotsiny ilay izy, nefa toa tsy mandeha izany.
Ny hany zavatra azoko eritreretina dia ny famenoana lasantsy solika 3 galona fotsiny tamin'ity fitsapana andrana ity, ary angamba ilay "mololo" naka tao anaty tanky dia tsy rendrika, fa tiako ho hita raha misy manana eritreritra . Azo inoana fa hampifangaro lasantsy galona feno aho amin'ny herinandro manaraka na hanandrana indray.
Misaotra hatrany daholo. Tena tiako ny mijery ity pejy web sy forum ity.
napetraky Anonymous (tsy voamarina) tamin'ny Sun, 03 / 22 / 2020 - 18: 56
Namaly ny Fiovam-pivezivezana solika - tsy miasa? by Anonymous (tsy voamarina)
Intake Manifold "fiovam-po"
Izany no nanovako ny isan-karazany fihinanana mba hamoronana ny pulsa ho an'ny paompy solika. Izy io dia sombin-aluminium kely izay notapahiko tamin'ny tsofa hack sy ny endrika misy rakitra. Izy io dia manana sombin'ilay gasket taloha be dia be ao aoriany hamoronana tombo-kase (nosoloiko ny gasket rehetra rehefa namboariko io).
napetraky ttravis amin'ny Mon, 03 / 23 / 2020 - 19: 11
Ny zava-misy fa afaka manompa ianao…
Ny fahafahanao mipaompy ny jiro sy mahazo lasantsy dia mahatonga ahy hieritreritra fa tsara ny tankinao. Zavatra roa no soso-kevitro:
Voalohany, hojereko fa afaka mahatsapa pulse tsindry tsara ianao amin'ny làlana mankany amin'ny pailinao.
Faharoa, hanafoana ny sivana ny solika avy amin'ny equation mandra-pahazoanao miasa ary ampidiro ao anatiny.
Sary mahafinaritra ireo ary toa marina daholo. Raha vantany vao manana zavatra mandeha ianao dia tiako ny mampiditra ny hevitrao amin'ny pejy tena izy. Ampidiro aho.
napetraky Anonymous (tsy voamarina) tamin'ny Sun, 03 / 22 / 2020 - 19: 02
Famonon-tsolika famonosana solika
Ny tranoko dia nanamboatra fako.
Ity no paompy entiko mampiasa, ary koa sarin'ny fononteny nataoko tamin'ny takelaka tahiry aluminium. Miakatra amin'ny motera izy amin'ny alàlan'ny visy roa izay mitazona ny fivorian'ny recoil voalohany. Tsy maintsy nanao fononteny vitsivitsy aho talohan'ny nahitako endrika sy toerana namelana ny tsipika solika sy ny paompy hiditra ao ambanin'ny fihenan'ny omby, fa mety daholo izany ary mandeha ny sarony ary toa tokony ho izy.
napetraky ttravis amin'ny Mon, 03 / 23 / 2020 - 19: 03
Namaly ny Famonon-tsolika famonosana solika by Anonymous (tsy voamarina)
Toa tsara. Tsara kokoa…
Toa tsara. Tsara lavitra noho ny ahy!
napetraky Anonymous (tsy voamarina) amin'ny Mon, 03 / 30 / 2020 - 14: 25
Miasa amin'ny jw-11 3hp aho…
Izaho miasa amin'ny jw-11 3hp Johnson raha misy manana fizarana fizarana hanombohan'ny fisintonana ve? Misaotra mialoha!
napetraky ttravis amin'ny Mon, 03 / 31 / 2020 - 11: 45
Namaly ny Miasa amin'ny jw-11 3hp aho… by Anonymous (tsy voamarina)
Misaotra anao nitsidika…
Indro misy fizarana boky. Ity misy lisitry ny faritra misy anao JW-11.
Azonao atao koa ny mijery ny HP-ko 3 Tetikasa fananganana.
napetraky tody tamin'ny Fri, 04 / 24 / 2020 - 16: 49
'Hanomboka sy hihazakazaka i Lightwin. Saingy ny fanesorana ny maotera miakatra / midina dia mamono raha tsy miadana loatra izy ireo. Ireo plugs sy baoritra vaovao natsangana. Mieritreritra aho fa angamba ny spark retard / advance? Misy torohevitra ve?
napetraky Stroman63 tamin'ny Sat, 04 / 25 / 2020 - 14: 54
Fiarahabana avy any Vancouver British Columbia. Te-hanomboka aloha aho amin'ny alàlan'ny fisaorana anao noho ny nametrahanao tranonkala toa ity. Raha tsy nisy ny fanazavanao laymans sy ny sary dia tsy ho afaka naka ny tetikasako voalohany aho, izany no raiko 1958 Evinrude 3 hp. Nipetraka tao anaty fitehirizana nandritra ny 55 taona izy io, saingy amin'ny tranokalanao dia mandeha izy io ary mandeha indray. Nahafinaritra ahy ny nanao an'io ka nahazo ny bug aho ary tsy afaka mitsahatra ny mahita ny fomba / loko 1950 efa antitra hamboarina. Ny fahafaham-po amin'ny fihazakazahana indray ary koa ny resaka amin'ny fandefasana sambo miaraka amin'ny olona dia mahatonga ny fizotrany rehetra hahafinaritra. Miaraka amin'ny fanampianao ny motera rehetra amin'ny sary dia mpihazakazaka tsara indray.
1957 Viking 5 ora.
1958 Evinrude 3 ora.
napetraky danlm224 amin'ny Mon, 06 / 30 / 2020 - 20: 16
1966 3 hp Evinrude - esorina ny caburetor
Vaovao aho amin'ny motera rehetra, indrindra amin'ny motera ivelany. Manana Evinrude 1966 3hp aho, maodely # 3602. Mandeha mandritra ny 10 segondra ny môtô ary dia izay. Mamerina amin'ny laoniny tsara fa mihazakazaka mandritra ny 10 segondra fotsiny, tsy maninona ny fikirakirana na ny famarana. Novakiako fa ny fantson-tsolika dia mety hiteraka an'io raha tsy misokatra rehefa miasa. Angamba izany no olako. Ny mpamaky antitra eo an-toerana dia iray ihany no hiasa amin'izany ary mihemotra 4-5 herinandro izy. Nanoro hevitra ahy izy fa esoriko ilay carburetor ary ento aty mba hitehirizako fotoana sy vola ary hataony mahandro. Nesoriko ny fonon'ny motera ary nojereko ny carburetor ary toa sarotra amiko ny manala azy ary avy eo misy ny fanamby lehibe kokoa amin'ny famerenana amin'ny laoniny tsara. Misy torohevitra azonao omena ahy ve dia hankasitrahana ao anatin'izany ny horonantsary fanaovana an'io na ny boky fanamboarana?